ILibreOffice 4.0 Namandla Amandla (Amaqiniso Afihliwe Phakathi Kwe-OpenOffice neLibreOffice) | Kusuka kuLinux
I-athikili ethakazelisayo abashicilele kuyo abantu, lapho umbhali wayo, umngane wethu UJacobo Hidalgo ingabe ukuhunyushwa kwesinye isihloko kubizwa I-LibreOffice 4.0 Namandla Amandla de UKeith Curtis.
I-LibreOffice 4.0 namandla weBrands
Ukuhumusha ngo- UJacobo Hidalgo. Isihloko sokuqala de UKeith Curtis
LibreOffice 4.0 ikhishwe ngesonto eledlule, futhi imibiko yezindaba kanye nemisebenzi yezokuxhumana bezinkulu, ukwedlula noma yikuphi ukukhishwa kwangaphambilini LibreOffice u I-OpenOffice, ngokumbozwa okungcono kunezethulo eziningi ezixhaswe kahle yiMicrosoft. Izixhumanisi eziningi zithunyelwe ngasemasayithini ajwayelekile I-LinuxToday.com, kodwa futhi I-TechCrunch, I-VentureBeat, IsikhathiMagazine, njll. Inani elihle lemibono beliqhamuka kubantu bebuza ukuthi yini umehluko phakathi kwalezi zinguqulo ezimbili. Abanye abanemibuzo eyisisekelo njengokuthi ingangeniswa yini noma cha LibreOffice imibhalo ye- I-OpenOffice.
LibreOffice yethula igama layo elisha nomphakathi emhlabeni. Onke ama-Linux distros asevele exwayisiwe kepha abasebenzisi abaningi beWindows ne-Mac abaqondi ukuthi kwenzekani. Abantu baze babe nentshisekelo ngamagama ngezizathu ezingokomzwelo. Imikhiqizo inamandla. Ukube ubusemzaneni oqhelile eNdiya ngosuku olubalele, ungathanda ukuba neCoke ukuze uqede ukoma kwakho uma ngabe bekuyiyona kuphela enezinhlamvu ozozibona. Ngisho nabantu abathanda ukuhamba bezama izinto ezintsha bangahle bangafuni ukubeka engcupheni into ebukeka ishisiwe, bejwayele ukugeza amanzi ngezinhlamvu ezihlekisayo lapho bekhathele, beshisa futhi bomile.
Endaweni yesoftware, ukucatshangelwa kwehlukile kepha kuhlobene. Abaningi bayesaba ukuzama izinto ezintsha ngoba ubuchwepheshe buvame ukufika budlule. Abantu bashisiwe ngeFarmville, Zune, Tweetdeck, iTunes, Nvidia, Comcast, AT & T, Sprint, Sun, Adobe, Gnome 2.x, Microsoft, IBM, njll.
Abanye babheka phansi ezisekelweni zekhodi ye-LibreOffice / OpenOffice ngoba isikhombimsebenzisi sayo sisebenza kabi kuneHhovisi likaMicrosoft, kepha abaningi abachitha isikhathi kuso babona ukuthi liphatha kanjani amafayela abo, ukusebenza okuningi, futhi ngokuvamile izinzile, iyashesha, iyaphatheka futhi imahhala. Abantu badonseleke ku- "OpenOffice" phakathi namahora abachitha beveza imibono yabo yokudala. Abaningi bahlobanisa ubukhulu kakhulu negama kunabantu abalithuthukisile. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu bahlole i-LibreOffice.
Ukube ubungachazela abasebenzisi be-OpenOffice lokho U-Oracle uxoshe bonke abahleli bohlelo ngaphambi kokushiya lo mkhiqizo ku-Apache, nokuthi iqembu labo elisha ngokwasemthethweni alikwazi ukwamukela izinguquko ezisuka kwiLibreOffice, bangathola ukuthi kufanele bavivinye umuntu omusha. Lowo mkhawulo wezomthetho okwamanje awuveli kuwebhusayithi ye-Apache. Kungaba futhi isexwayiso esisebenzisekayo uma babala konke ukusebenza okungenayo i-LibreOffice. Uhlu olugcwele lwamanje seludidekile engqondweni (4.0, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3), Futhi basaqala nje (Ama-hacks alula, i-Gsoc).
Inkinga enkulu okufanele ibhekwe izindleko zamathuba. Esikhundleni sokwenza ngcono umkhiqizo okhona we-OpenOffice, umphakathi uphoqeleka ukuthi wakhe omusha. Lokho kuyishwa elikhulu ngoba kunabantu abaningi eLibreOffice abafake isandla ku-OpenOffice, futhi abenze uphawu oluyigugu namuhla. Njengoba i-Apache OpenOffice ingakwazi ukwamukela izinguquko ezisuka kuLibreOffice, umkhiqizo usetshenziswa kabi. Futhi esikhundleni sokufaka izinsiza, i-Apache iyi ukudlala ikati, edinga ilayisense ephansi yale khodi, namathuluzi aphansi.
Ngoba i-Apache OpenOffice inophawu, futhi idlanzana labasebenzi abasebenza ngokugcwele kukhodi yayo, bangahlala bezithola izindlela zokubika izindaba ezimnandi futhi nikeza inkohliso yenqubekela phambili:
"Kube nokulandwa okungama-35M, okusindisa umhlaba ama- $ 21M ngosuku" "Ngubani ofuna ukusiza nge-wiki?" "Manje sinezindawo zokusebenzela ezintsha eziyi-6 ezibhalwe ama-Easy Bugs" "Ngabe kukhona umuntu ongamba imibhalo ngefomethi yethu? SDF? " "Kungakuhle ukuthola umuntu ozopakisha i-OpenOffice eFedora bese unikeza abasebenzisi enye indlela" "Sithole amavolontiya amasha angama-50 azosiza nge-Q & A ocingweni lwethu lwakamuva lokucela usizo." Njll
Lokhu kwaba ukushintshana okwenzeka ngesikhathi se- inkulumo ethokozisayo kaMichael Meeks eFosdem 2013
Umbuzo: Angazi noma yimi ngedwa, kepha ngithanda ukubona ukuthula phakathi kweLibreOffice ne-Apache OpenOffice. Ingabe ikhona intuthuko?
UMichael Meeks: Kulungile, ngicabanga ukuthi kunamathuba amaningi okwabelana ngekhodi. Sinikeza ikhodi ngaphansi kwelayisense i-Apache engayifaka, okungenani kuma-binaries akhishiwe, ngakho-ke ngicabanga ukuthi kukhona indawo yalokho. Futhi, ngicabanga ukuthi kufanele uhambe ubabuze. Anginantshisekelo yokukhuluma kakhulu ngayo. Ngingasho into engafanele.
Abantu emphakathini weLinux bayasazi lesi simo, kepha abaningi abazi ukuthi iLibreOffice ingenza okuncane kakhulu ukwenza ngcono izinto. ILibreOffice ayikwazi ukuvimbela ukuthi kudalwe izimfoloko ezintsha, futhi akekho noyedwa ngaphakathi obesongela imfoloko. ILibreOffice ayikwazanga ukumisa i-Oracle ekunikezeni lo mkhiqizo kunoma ngubani. ILibreOffice ayikwazanga ukuvimba i-Apache ekwakheni iphrojekthi engayemukeli ikhodi yakho. ILibreOffice ayikwazi ukusiza kepha yenza abantu abasha badideke lapho bebona i-Apache, i-OpenOffice, kanye newebhusayithi enhle, ngaphandle kokubona ukuthi lokhu yiyona "Project mascot" yesisebenzi se-IBM.
Kubukeka sengathi abantu abangaphakathi kwe-Apache bangenza okuthile, kepha abaningi babo bawujabulele umqondo wokuba namabili "Izinhlamvu". Bazibona njengabangenhla abanelayisense evulekile kakhulu, futhi iLibreOffice ikhululekile ukuthatha noma iyiphi ikhodi abayithola ilusizo. Ngeshwa, ababoni ukuthi njengoba lawa makhodi ayisisekelo ehlukana, lokhu kuba nzima kakhulu. ILibreOffice ayisayisebenzisi ifomethi yokwenziwa kwendawo ye-SDF. Ngakho-ke phakathi kokudideka, nenkohliso yenqubekela phambili yokugeleza kwemali, singaba lapha isikhashana. I-IBM ibilokhu ikhona cishe iminyaka eyikhulu. Mhlawumbe bayakujabulela ukulinda kuze kube yilapho wonke umuntu eshonile futhi bafisa ukuthi isizukulwane esilandelayo seLibreOffice siphinde sibe nobungane nezinhlelo zabo.
Uthola imibono isho lokho bangathanda ukuqeda imfoloko. Ukube nje bebenokuhlakanipha ngaphambi kokudala eyodwa. Kodwa-ke, kubonakala sengathi abanayo imibono yalokho okulandelayo. Kusadingeka ukuhlakanipha okwengeziwe.
ILibreOffice isebenza kahle kakhulu eqenjini elincane kangaka. Umphakathi wesoftware wamahhala uthatha imingcele futhi wenza ngcono ikhodi ngezindlela eziningi. Kodwa-ke, umphakathi ungasebenzisa kalula izigidigidi zamaRandi ukuqasha abantu abaningi ukuthi basebenze ngokugcwele futhi baqeqeshe amavolontiya. Mhlawumbe okukhathaza kakhulu ukuntuleka kwabantu abayiqondayo ikhodi yokuhlelwa koMlobi, okuyisiqephu esiyinkimbinkimbi kunazo zonke esakhiweni sonke. Ikhodi nabantu babalulekile, kepha abantu abayiqonda kahle le khodi babaluleke kakhulu.
Nota: Ngibhala ngeLibreOffice / OpenOffice ngoba angithandi ukubona ifayela le- brand kanye namavolontiya amoshile
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » I-LibreOffice 4.0 namandla weBranding (Amaqiniso Afihliwe Phakathi Kwe-OpenOffice neLibreOffice)
Ngibona sengathi kuyizaba ukusho ukuthi umkhiqizo awulona ikhwalithi, okungenani selokhu kwaqala ukusebenza izinhlobo zakamuva bezithuthuka njalo, kepha ngejubane lomnenke, futhi isikhathi ngasinye lapho bethi kuzoba kuhle kakhulu, futhi ngishaya head, futhi akuyona nje ukuhambisana.
Uma ungayithandi, ungazisebenzisi futhi yilokho kuphela
Ngincamela ukusebenzisa i-gnumeric ne-abiword, nalapho ngidinga ihhovisi elithe xaxa ngempela
Hhayi-ke, kuyadabukisa kanjani ukuthi ucabanga ukuthi thina esisebenzisana neLibreOffice sifuna "izaba" ezinjengalezi. Umsebenzi uyenziwa, ngikholwe (noma cha).
Zikhona izincwadi ozaziyo ozozihlelela imitapo yolwazi i-VCL? Noma kukhona umuntu omaziyo engingabuza ukuthi ungahlela kanjani ngemitapo yolwazi ye-VCL?
Bengikhuluma noMichael Meeks, wangitshela ukuthi abanayo i-VCL library API.
Izinkokhelo zami azisebenzi ngalutho uma ngingazibhali ngemitapo yolwazi ye-VCL.
Ngifunde ukwenza kanjani uhlelo ngokubheka i-GTK 3.6 ne-Vala APIs, njll.
Kepha angikwazi ukufunda uma ngingenayo i-API noma umuntu ongangisiza ngezibonelo zekhodi elula nge-VCL.
api.libreoffice.org, imibhalo.libreoffice.org ne-opengrok.libreoffice.org, kendy (ku-IRC) angakusiza. Ngokwengeziwe, i-caolanm ingeze ukusekelwa kokwakha izingxoxo ze-Glade ezingasetshenziswa yi-LibO.
Siyabonga ngokukuthumela lapha. Ngijabule kakhulu ukuthi le ndatshana ingafundwa ngabantu abaningi.
Ngabe kufanelekile yini ukuthi izithuthukisi ze-openoffice zingafakwa ku-libreoffice futhi okuphambene nalokho. Noma kushiwo kabi, ukuthi bakopisha ikhodi ngapha nangapha?
Kungaba okuthokozisayo uma benesisekelo sokuhambisana, ngokwesibonelo, ukuthi izandiso ziyahambisana phakathi kwawo womabili ama-suites, zisindisa inqubo yokuhlela zombili.
Kepha kubonakala kukuhle kimi ukuthi bobabili baqhubekela phambili ngezindlela ezahlukahlukene ngokuya ngokusebenza nokusebenza, ngakho-ke umsebenzisi ngamunye angasebenza nalokho okumfanela kahle kakhulu.
Kepha uma abantu abakhululekile baqala ukusebenza kule phrojekthi ngaphambi kokuthi ithengwe yi-oracle, uma bexoshiwe bekuyindaba yenzuzo ephindwe kabili, awukwazi ukusebenza kumaphrojekthi amabili aphikisanayo ngasikhathi sinye.
ULuis Armando Medina kusho
Ngicabanga ukuthi i-OpenOffice ibingumkhiqizo omuhle futhi nomkhiqizo othole idumela labo bonke, umzuzu wokuthi yonke into yahlukana kwaba ngokuthengwa kweSun Microsystems ngu-Oracle nokuklinywa kwephrojekthi. Kimi iLibreOffice ingumongo wokuthi i-OpenOffice yayiyini futhi ngokususa iSun / Oracle inenkululeko nokuqina okukhulu ekukhuleni kwayo njengomkhiqizo nomkhiqizo, lokhu kubonakala ekuthuthukisweni okubonwe kuzinguqulo zakamuva lapho ikhona bona umkhiqizo ochwepheshe, osebenzayo futhi ozinze kakhudlwana. Ngibonile inguqulo 4 futhi kubonakala kimi iphakeme kakhulu kunanoma iyiphi inguqulo yangaphambilini, kufaka phakathi izinhlobo ze-OpenOffice ezisamile. Lesi isiko lesoftware yamahhala elisebenzayo nesibonelo okufanele silandelwe njengephrojekthi nendaba yempumelelo.
Phendula uLuis Armando Medina
Ngiyavumelana nenguqulo yakho yamazwana engu-4 yinhle futhi iphakeme kune-openoffice (isipiliyoni sakho, akukho cala) i-openoffice yinto yesikhathi esidlule eshiwo ngandlela thile, i-libreoffice iyona suite engasetshenziswa isoftware yamahhala nomsebenzisi ovamile
Kuyadabukisa ukuthi ngenxa yezinqubomgomo zenkampani, umkhiqizo okhulayo uyama noma uwe. Ngenhlanhla i-FreeOffice yazalwa njengenye indlela. Lokhu kukhombisa ukuzibophezela komphakathi ekugcineni iphrojekthi iphila nokuqhubeka nokuhlinzeka ngesikhungo esihle sehhovisi esisebenzela iningi lethu.
isiqephu 05 kusho
Kuyimpi ewubuwula ekugcineni engeke isinikeze inzuzo thina basebenzisi. Lokho kunginika ukuqhathanisa ihhovisi elivulekile nokia .. suspicius ...
IFirefox 19 itholakala nomfundi ohlanganisiwe wePDF